ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်များ
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
authentication စပ်နှင့်အတူ brimming မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရသာ, ကောင်းသောတရုတ်အစားအစာကိုဥရောပတိုက်တွင်လာတခါတရံခဲယဉ်းသည်. သို့သျောလညျး, သတငျးကောငျးသိသာထင်ရှားတဲ့တရုတ်လူမျိုးစားသောက်ဆိုင်ဥရောပ၌ရှိကွောငျးဖြစ်ပါသည် - သူတို့ကိုသင်ရှာတွေ့မှဘယ်မှာသိပါရန်ရှိသည်, နှင့်မည်သို့ရှိရဖို့. သူတို့ထဲကအများစုဟာအဓိကဥရောပမြို့ကြီးများသို့မဟုတ်မြို့တော်၌ရှိကြ၏ကတည်းက, အဲဒါကိုဦးစားပေးမည်င် ရထားရောက်ရှိမည်.
နှင့် ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးအစာရှောင်ခြင်းမီးရထားကွန်ယက်ကို ဥရောပဝါကြွားတတ်ကြောင်း, နှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာလမ်းကိုအပေါ်သာယာလှပလမ်းကြောင်းပျော်မွေ့ - နာရီကြာတဲ့အမှု၌ဘယ်နေရာမှာမဆိုရဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှကဖွင့်. အခြို့သောအာရှအစားအစာအဓိကတပ်မက်သောသူသည်သင်တို့တွင်သူတို့အဘို့, ဤနေရာတွင်ဥရောပအကောင်းဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်များမှာ, နှင့်မည်သို့ရထားအဲဒီမှာရဖို့:
ပင်လယ်ပြင်နန်းတော် - အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
အများစုမှာစားသောက်ဆိုင်အရသာဖို့ဖောက်သည်ကြီးမြတ်တစ်ခုခုပေးခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြ. သို့သျောလညျး, အမ်စတာဒမ်အတွက်ပင်လယ်နန်းတော်တစ်ခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးရည်မှန်း အတှေ့အကွုံ သာသင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးထိတွေ့ဆက်ဆံဒါပေမယ့်လည်းမျက်စိပေါ်မှာလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. တစ်ဦးစေတီတော်နဲ့တူတညျဆောကျ, ဒီရေပေါ်စားသောက်ဆိုင်ထွက်ရှိအကောင်းဆုံးကိုတရုတ်အစားအစာအချို့ကိုနှင့်အတူအနားယူရန်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ဆန်ဟင်းလျာများ, ဖက်ထုပ်, buns, နွေဦးပေါက်လိပ် - သင်ကအမည်, သူတို့ကမီနူးပေါ်မှာရှိသမျှနေနှငျ့သငျတရုတ်ဖြစ်လျှင်ကဲ့သို့စစ်မှန်မျိုးစုံမြည်းစမ်း. ဒါကဥရောပအကောင်းဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်များ၏တဦးတည်းအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားရဲ့အဘယ်အရာကိုဖွင့်. သငျသညျရထားအမ်စတာဒမ်ရရန်ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်, သင်လုပ်နိုင်သည် ပဲရစ်ကနေရထားစီးဖမ်း, ဘာလင်, နှင့်အခြား ဥရောပမြို့ကြီးများ.
ကောင်းသောသူငယ်ချင်းများနှင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်များ - ဘာလင်, ဂျာမနီ
တစ်မြို့ chock-အပြည့်အဝတရုတ်စားသောက်ဆိုင်များတွင်, ဥရောပအကောင်းဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်တဦးအဖြစ်ကြေညာခံရအထူးအဓိပ်ပာရရှိထားသူ. တည်ရှိသော Kantstrase, ဘာလင်ရဲ့တရုတ်တန်းအတွက်, ကောင်းသောသူငယ်ချင်းများနှစ်ဦးစလုံးတရုတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကမျက်နှာသာပေးကာကျယ်ပြန့် menu နဲ့စစ်မှန်အစားအစာဝါကြွားတတ်ကြောင်းတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ခရီးသွားဧည့်.
သငျသညျကောငျးမှသူငယ်ချင်းများသွားရောက်ကြည့်ရှုပါလျှင်ရသောအခါဘာလင်၌သင်တို့ကိုမှားယွင်းတဲ့မသွားပါလိမ့်မယ်. သို့ ဘာလင်ရ, သငျသညျဥရောပ၌လုံးဝနီးပါးမဆိုအဓိကမြို့ကနေရထား ယူ. နာရီအတွင်းအဲဒီမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
ဟန်ကျိုး - ရောမမြို့, အီတလီ
ငါတို့သည်ဣတလိစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ, ကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့်တရုတ်အစားအစာကမချိတ်ဆက်ဘူး. သငျသညျအတူတူခံစားရလျှင်, သငျသညျဖွယ်ရှိအီတလီပြုသင်ယူဖို့အံ့အားသင့်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ် ပျော့ပျောင်းအစက်အပြောက်များ တရုတ်အထူးများအတွက်. နှင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးတရုတ်အစားအစာစားသောက်ဆိုင်များ၏တဦးတည်း, ဟန်ကျိုး, အကယ်စင်စစ်အရေးဆိုမှုထေူ.
ဒါဟာအချို့အီတလီလွှမ်းမိုးမှုထည့်သွင်း, ဒါပေမယ့် menu ကိုအများစုသငျသညျရောမမွို့ရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုတှေ့လြှငျသငျသညျကွိုးစားရမယ်လို့စစ်မှန်တရုတ်အစားအစာဖြစ်ပါတယ်. tour ရထားအီတလီ ကြောင်းဖြစ်ပျက်စေရန်, သို့မဟုတ်တစ်ဦးရထားယူ ရောမမြို့ အခြားဥရောပမြို့တော်ထဲကတစ်ခုကနေ.
ဘရပ်ဆဲလ် - ဒူနဂါးဥရောပအကောင်းဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်များကြားတွင်သင်တန်းဖြစ်ပါသည်ကိုးကား, ဘယ်လ်ဂျီယံ
တစ်ဝါကြွားတတ်ကြောင်းနောက်ထပ်စားသောက်ဆိုင် စိတ်ကူးအတွင်းပိုင်း ယင်း၏အံ့သြဖွယ်ဟင်းလျာများနဲ့တွဲပြီးနှင့်ဥယျာဉ်ဒီဇိုင်း, ကိုးကားဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ဒူနဂါးကွက်တိဥရောပအကောင်းဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်တယောက်ကိုခေါ်နေသည်. ကျော်နှင့်အတူ 300 ထိုင်ခုံနှင့်တစ်ခုလက်ရာမြောက်သောတန်ဆာဆင်ဥယြာဉျ, သင်တစ်ဦးသင့်လျော်သောအရှေ့တိုင်းအိပ်မက်ထဲသို့လမ်းလျှောက်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်. မဆိုပန်းကန်အံ့ဩဘွယ်ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မှိန်ပေါင်းလဒ်နှင့်အိမ်တော်ကိုအထူးအထဲက single သွားဖို့ရှိပါတယ်, ပီကင်းဘဲ, သငျသညျနေပါလျှင်အရာနှစ်ခုအဖြစ်သငျသညျကွိုးစားရမယ် ရထားဘရပ်ဆဲလ်သွားရောက်လည်ပတ်.
တရုတ်မီးဖိုချောင်အဘယ်သူမျှမ. 27 - ဗီယင်နာ, သြစတြီးယားတစ်ဦး
ဗီယင်နာမြို့တွင်တရုတ်တန်းမှာတော့, တရုတ်မီးဖိုချောင်အဘယ်သူမျှမ. 27 မကြာခဏအကောင်းဆုံးတစ်ဦးအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏အစားအစာစပ်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ဒီနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကအစတချို့ပိုပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောဟင်းလျာများပူဇော်, ထိုကဲ့သို့သောရေဘဝဲသုပ်အဖြစ်, သင်ဂန္နှင့်အတူကပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ Gong Bao ကြက်သားအကြံပြုသော်လည်း. သင်အလွယ်တကူအရှိဆုံးအဓိကဥရောပမြို့မြို့တို့မှရထားဗီယင်နာမှသွားလာလို့ရပါတယ်, ဒါကြောင့်အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မရ.
ဥရောပအကောင်းဆုံးတရုတ်အစားအစာစားသောက်ဆိုင်တချို့၏လက်ရာမြောက်သောဟင်းလျာများကိုအမြည်းဖို့အဆင်သင့်? အစောပိုင်းကသင်၏ရထားလက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ, နှင့် ရထားပေါ်တွင်ခုန် သင်၏နောက်ကြီးမားသော gastronomic စွန့်စားမှုရန်သင့်အားယူ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-chinese-restaurants-europe/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်, ဒီ link များတွင်သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml – သငျသညျ / en / နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏လင့်များရှိသျောလညျးသငျ / fr / သို့မဟုတ် / က de / သို့မဟုတ် / က / နှင့်အခြားဘာသာစကားများကြောင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်အတွင်းအပြင်
#asianfood #BestChineseRestaurants #chinesefood europetravel ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ်